Androidsis သည် AB အင်တာနက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအားလုံးကိုဝေမျှရန်၊ အပြည့်စုံဆုံးသင်ခန်းစာများနှင့်ဤစျေးကွက်အပိုင်း၏အရေးကြီးဆုံးထုတ်ကုန်များကိုဆန်းစစ်ရန်ဂရုပြုပါသည်။ စာအရေးအသားအဖွဲ့သည်ကဏ္worldမှသတင်းအားလုံးကိုတာဝန်ခံရန်အန်းဒရွိုက်လောကနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Androidsis ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက Android စမတ်ဖုန်းကဏ္ the ရှိရည်ညွှန်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Androidsis အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် Android နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ။ သငျသညျအစအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဤပုံစံကိုပို့ပါ.
စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုစိတ်အားထက်သန်သည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော operating system များမှာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် Android ဖြစ်ပြီး Laptop နှင့် desktops များအတွက် Linux ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် Mac, Windows နှင့် iOS တို့တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒီမိုဘိုင်း operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လေ့လာပြီးသင်ယူခဲ့တာပါ။ ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာ Android မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များစုဆောင်းခြင်း။
Writer နှင့်အယ်ဒီတာသည် Android နှင့်၎င်း၏ကိရိယာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ စမတ်နာရီများ၊ ငါကလေးဘဝကတည်းကနည်းပညာလောကကြီးကိုစွန့်စားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Android အကြောင်းနေ့စဉ်သိခြင်းဟာငါ့ရဲ့အပျော်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမ ၀ င်ခင်မှာ Windows Mobile ကစီမံခန့်ခွဲခဲ့တဲ့ PDAs ကမ္ဘာထဲ ၀ င်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်တဲ့ Alcatel One Touch Easy, မိုဘိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာကတော့မင်္ဂလာပါ။ အယ်ကာလိုင်းဘက်ထရီ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး Android စီမံခန့်ခွဲသောစမတ်ဖုန်း၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခင်ဆဲရှိသေးသည့် HTC Hero ဖြစ်သည်။ ယခု မှစ၍ စမတ်ဖုန်းအမြောက်အများသည်ကျွန်ုပ်၏လက်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူနေလိုပါကကျွန်ုပ်သည် Google Pixels ကိုရွေးချယ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် HTC Dream ဖြင့် Android ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုမှာထို operating system နှင့်အတူဖုန်း ၂၅ ခုထက်ပိုသောကြောင့်ထို နှစ်မှစ၍ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ယနေ့ငါ Android အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များအတွက် applications များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေ့လာ။
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းမှာ Android တပ်ဆင်ထားသော HTC Diamond ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် Google operating system ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျွန်မလေ့လာမှုကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု - မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကိုနှစ်သက်တယ်။
အမြဲကတည်းက ... ချိတ်! Android လောကနှင့်၎င်းကိုဝန်းရံနေသောမယုံနိုင်စရာဂေဟစနစ်နှင့်အတူ။ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ Android နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ gadgets, Accessories နဲ့ devices တွေအကြောင်းငါစမ်းသပ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရေးတယ်။ သတင်းကို“ ဖွင့်” ရန်ကြိုးစား၊
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီး Android ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုနက်ရှိုင်းစွာသိရန်အရေးကြီးသည်မှာစာဖတ်သူများထံသို့ယင်းတို့ကိုထုတ်လွှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ Carl Pei က“ သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘူး။ မိုဘိုင်းတွေမှာအတွေ့အကြုံရှိရမယ်။
Paco L ကို Gutierrez
Android ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစမ်းသပ်ပြီး Google ရဲ့ operating system ကိုကျွန်တော်စိတ် ၀ င်စားသည်ကကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုစမ်းသပ်ချင်သည်။ ငါသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ချင်တယ်, သူတို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအသေးစိတ်သိနှင့်သူတို့ကမ်းလှမ်းသမျှကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။
နှစ်များတစ်လျှောက်ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများအသုံးပြုသော Android ကိုနှစ်သက်သည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုရေခဲမုန့်ဒါမှမဟုတ်သစ်သီးခြောက်လို့နာမည်ပေးထားတာကြောင့် Android ကိုမစွန့်ပစ်ဘူးလို့ငါကတိပေးခဲ့တယ်။ ငါနည်းပညာကိုချစ်ပြီးသတင်းအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်။
Amstrad ကကျွန်တော့်အတွက်နည်းပညာတံခါးတွေဖွင့်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ Android ကို ၈ နှစ်ကျော်ရေးသားခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Android ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဒီ operating system နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်ရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။
ခရီးသွားခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံသည်ကျွန်ုပ်၏အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော်လည်း Android ဖုန်းတွင်မဟုတ်လျှင်မည်သူမျှကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ Google operating system ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကတည်းကကျွန်တော်စိတ် ၀ င်စားခဲ့ဖူးပြီး၊ အဲ့ဒီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာခြင်းကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကျွန်တော်နှစ်သက်သည်။
Alfonso က de Frutos
နည်းပညာအသစ်များနှင့် Android အတွက်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်၏ OS နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်နည်းပညာအသစ်များနှင့်အထူးသဖြင့် Android တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ အထူးသဖြင့်ပညာရေးကဏ္ link နှင့်ပညာရေးနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂူဂဲလ်လည်ပတ်မှုစနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ငါ Android အကြောင်းအသည်းအသန်ဖြစ်၏။ အရာရာအားလုံးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဒီ operating system အကြောင်းလေ့လာသင်ယူဖို့ငါ့ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းတီးခဲ့တယ်။ ဒီတော့ Android နည်းပညာနဲ့သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြည့်စုံအောင်ကူညီဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
နည်းပညာကကျွန်တော့်ကိုအမြဲစွဲမက်စေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် Android စမတ်ဖုန်းတွေရောက်လာတာကကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုငါ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိုတိုးစေတယ်။ Android နှင့် ပတ်သတ်၍ အသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။